ဗိုလ်ချုပ် ပုံတစ်ထောင် တန်တွေထွက် လာပြီးနောက် တစ်သောင်းတန်ေ ငွစက္ကူတွေ ယူ ရင် သတိထားဖို့ လိုနေပါပြီ – Shwewiki.com
ဗိုလ်ချုပ် ပုံတစ်ထောင် တန်တွေထွက် လာပြီးနောက် တစ်သောင်းတန်ေ ငွစက္ကူတွေ ယူ ရင် သတိထားဖို့ လိုနေပါပြီ
မြန် မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို အဓိက ဦးစီးကြိုးစားခဲ့တဲ့သူဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုရင် တကမ္ဘာလုံးက လက်ခံထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ငယ်ရွယ်မှုတွေကို စတေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံကြီး သူ့ကျွန်ဘဝကနေ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် အသက်ကို မငဲ့ကွပ်ပဲ ကြိုးစားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာ့ တပ်မတော်ဆိုတာဟာလည်း ဗိုလ်ချုပ်တို့ ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီး တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တစ်ချိန်က ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ ငွေစက္ကူတွေ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ပျောက်ကွယ်ခဲ့တာ အတော်ကို ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။
လက် ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအနေနဲ့ ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ ငွေစက္ကူတွေကို ပြန်လည် တရားဝင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ငွေစက္ကူတွေကတော့ ၁၀၀၀ တန်နဲ့ ၁၀၀၀၀ တန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းငွေစက္ကူတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ ဝေဖန်မှုတွေ မြင့် တက်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ငွေစက္ကူများကို တစ်သောင်းတန် အား စတင်ထုတ်ဝေခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ထောင်တန်ကိုတော့ နောက်မှ ဆက်လက် ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းကဲ့သို့ ထုတ်ဝေမှုမှာ ငွေစက္ကူ ၂ ခုဟာ အရောင်အဆင်း တူညီနေတာကြောင့် တစ်သောင်းတန် အုပ်တွေထဲမှာ တစ်ထောင်တန်တွေ ညပ်ပါလာနိုင်တယ်လို့ လူမှုကွန်ယက် အကောင့်တွေမှာ ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ငွေစက္ကူ ၂ ခုဟာ အရွယ်အစားသာ အနည်းငယ်ကွာပြီး၊ အနားသတ်က အစ တူညီနေပြီး အရောင်အသွေးဟာလည်း ပုံစံတူ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်သောင်းတန် တစ်အုပ်ကို သေချာကြည့်ရှုပြီးမှ ရေတွက်မယ်ဆိုရင် ထောင်တန်ရောခဲ့ရင်တွေ့နိုင်သော်လည်း များစွာသော ပိုက်ဆံ အုပ်တွေကိုသာ ရေတွက်ရမယ်ဆိုရင် သေချာပေါက် မှားနိုင်တဲ့ အနေအထားဖြစ်နေတာကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လျက်ရှိပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ကြီးရော အဆိုပါ ငွေစက္ကူတွေကို လဲလှယ်ပြီးပြီလား……? တကယ်ကို သတိထားပြီး သုံးစွဲရမယ့် ငွေစက္ကူတစ်ခုဖြစ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း သုံးစွဲတော့မယ်ဆိုရင် သေချာစီစစ်ဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေနော်………………။
မွနျ မာနိုငျငံရဲ့ လှတျလပျရေးကို အဓိက ဦးစီးကွိုးစားခဲ့တဲ့သူဟာ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးဆိုရငျ တကမ်ဘာလုံးက လကျခံထားပွီးသားဖွဈပါတယျ။ ဗိုလျခြုပျဟာ ငယျရှယျမှုတှကေို စတေးပွီး မွနျမာနိုငျငံကွီး သူ့ကြှနျဘဝကနေ လှတျမွောကျဖို့အတှကျ အသကျကို မငဲ့ကှပျပဲ ကွိုးစားခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ လကျရှိ မွနျမာ့ တပျမတျောဆိုတာဟာလညျး ဗိုလျခြုပျတို့ ဦးစီးဦးဆောငျလုပျပွီး တညျထောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အရငျတဈခြိနျက ဗိုလျခြုပျပုံပါ ငှစေက်ကူတှေ ထုတျလုပျခဲ့ပမေယျ့လညျး ပြောကျကှယျခဲ့တာ အတျောကို ကွာပွီဖွဈပါတယျ။
လကျ ရှိ မွနျမာနိုငျငံ အစိုးရအနနေဲ့ ပြောကျကှယျနတေဲ့ ဗိုလျခြုပျပုံပါ ငှစေက်ကူတှကေို ပွနျလညျ တရားဝငျ ထုတျဝခေဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ ငှစေက်ကူတှကေတော့ ၁၀၀၀ တနျနဲ့ ၁၀၀၀၀ တနျတို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ယငျးငှစေက်ကူတှနေဲ့ပတျသတျပွီး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လူမှုကှနျယကျတှမှော ဝဖေနျမှုတှေ မွငျ့ တကျခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါ ငှစေက်ကူမြားကို တဈသောငျးတနျ အား စတငျထုတျဝခေဲ့တာ ဖွဈပွီး၊ တဈထောငျတနျကိုတော့ နောကျမှ ဆကျလကျ ထုတျဝခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ယငျးကဲ့သို့ ထုတျဝမှေုမှာ ငှစေက်ကူ ၂ ခုဟာ အရောငျအဆငျး တူညီနတောကွောငျ့ တဈသောငျးတနျ အုပျတှထေဲမှာ တဈထောငျတနျတှေ ညပျပါလာနိုငျတယျလို့ လူမှုကှနျယကျ အကောငျ့တှမှော ဝဖေနျခဲ့ကွပါတယျ။
ငှစေက်ကူ ၂ ခုဟာ အရှယျအစားသာ အနညျးငယျကှာပွီး၊ အနားသတျက အစ တူညီနပွေီး အရောငျအသှေးဟာလညျး ပုံစံတူ ဖွဈပါတယျ။ တဈသောငျးတနျ တဈအုပျကို သခြောကွညျ့ရှုပွီးမှ ရတှေကျမယျဆိုရငျ ထောငျတနျရောခဲ့ရငျတှနေို့ငျသျောလညျး မြားစှာသော ပိုကျဆံ အုပျတှကေိုသာ ရတှေကျရမယျဆိုရငျ သခြောပေါကျ မှားနိုငျတဲ့ အနအေထားဖွဈနတောကွောငျ့ ဝဖေနျမှုတှမွေငျ့တကျလကျြရှိပါတယျ။
ပရိတျသတျကွီးရော အဆိုပါ ငှစေက်ကူတှကေို လဲလှယျပွီးပွီလား……? တကယျကို သတိထားပွီး သုံးစှဲရမယျ့ ငှစေက်ကူတဈခုဖွဈလာပွီဖွဈပါတယျ။ ပရိတျသတျကွီးလညျး သုံးစှဲတော့မယျဆိုရငျ သခြောစီစဈဖို့ အကွံပွုလိုကျပါရစနေျော………………။
လက်ဝှေ့ထိုး တဲ့ လက်တွေ နဲ့ ဂီတအနု ပညာတွေ ဖန်တီးပြလိုက် တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း
မြန်မာအိုင်ဒေါကပြိုင်ပွဲ ဝင်တွေ ရဲ့တေးစီးရီးတွေထဲမှာ မှ မောင်ချို ကအကောင်းဆုံးပဲ လို့ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ ကိုပေါက်